Connectivity | Reef Resilience
Fikojakojana ny fifandraisana eo amin'ny tontolo iainana eo anelanelan'ny sy eo anelanelan'ny habaka.
Ny fampifandraisana dia manondro ny habetsaky ny isa mifandraika amin'ny fifanakalozana atody, ny fisintonana an-dranomasina, ny tanora na ny olon-dehibe. Izy io koa dia manondro ny fifandraisana ara-tontolo iainana mifandraika amin'ny toeram-ponenana akaiky sy lavitra. Ny fampifandraisana eo an-toerana sy eo anelanelan'ny faritra voaaro dia manan-danja amin'ny fitazonana ny fahasamihafana, ny tahiry trondro, ary indrindra fa ny fiarovana fiarovana ara-tontolo iainana.
A tambajotran'ny MPA tokony hampitombo ny fifandraisana eo amin'ny MPA tsirairay mba hiantohana ny fiarovana ny fiasa ara-tontolo iainana sy ny vokatra. Ny fifandraisana sy ny fifandraisana eo amin'ny tontolo iainana dia:
Fifandraisana amin'ny alàlan'ny fanodinana tsy tapaka ao anaty tsangan'ny rano eo anelanelan'ny tranokala MPA
Regular famarotana ny lavanila avy amin'ny MPA ho an'ny iray hafa
Ny fiainana an-dranomasina ao an-tranony, avy amina toerana iray mankany amin'ny iray hafa
Fifandraisana amin'ny toeram-pifandraisana mifandraika toy ny haran-dranomasina sy ny fandriam-bidy, na eo amin'ny honko sy ny zaridaina ary ny haran-dranomasina.
Ny fifandraisana eo amin'ny faritra voaaro sy ny faritra misokatra ho an'ny mpanjono dia manan-danja ihany koa mba hanohanana ny jono eo an-toerana spillover ny olon-dehibe, ny zana-badika, ary ny lavanila mankany amin'ny faritra voaangona. ref
Ampiasao ny isa kely indrindra ho an'ny faritra voaaro ao anaty tamba-jotra
Ampiasao ny tahan'ny kely indrindra ho an'ny tahirin-dranomasina, arakaraky ny karazan-javamaniry ilàna fiarovana, ny halaviran-dry zareo, ary raha misy fitantanana mahomby afaka atao ivelan'ny tahiry (ohatra: 0.5-1 km sy 5-20 km). ref
Ny tahirin-dranomasina dia tokony mihoatra ny avo roa heny noho ny habetsaky ny karazam-ponenan'ny fokontany (eo amin'ny lafiny rehetra).
Raha ny tanjona dia ny hiarovana ny karazana rehetra, dia zava-dehibe ny manana faritra midadasika (faritra kely dia afaka manome tombontsoa ho an'ny karazana sasany tsy mandeha lavitra); Ho an'ny fiarovana ny zavamaniry isan-karazany, ny haben'ny tendrony dia 10-20 km lava. ref
Raha fantatra mazava ny lamosim-pandrefesana sy / na ny lozam-pifaneraserana amin'ny karazam-borona manokana, ity fampahalalana ity dia afaka manazava ihany koa ny fanapahan-kevitra momba ny haben'ny faritra azo antoka.
Miaro ireo toerana manan-danja izay ampiasaina amin'ny karazam-bavaka mandritra ny androm-piainany (ohatra, ho an'ny trano fonenana, toeram-pambolena sy fiompiana trondro) any amin'ny toeram-ponenana an-dranomasina, ary manome antoka fa ny tahiry dia avela hamela fihetsiketsehana eo aminy (ohatra ny fanovana ny habakabaka ontogenetic, . ref
Ampidiro ny singa ara-tontolo iainana manontolo (oh: harambato eny an-dranomasina) any amin'ny toeram-ponenana an-dranomasina.
Mampiasà karazana elanelana misy elanelana eo amin'ny faritra voaaro ao anaty tamba-jotra
Ny sambo mpiaro an'habakabaka 1-15 km no miavaka, miaraka amin'ireo tahiry kely kokoa akaiky kokoa.
Ho an'ny famaranana ara-potoana rehetra: Ny karazana faritra hafa (ohatra, ny fitsaboana ara-barotra na ny faneriterena fidirana) dia mety ho lehibe amin'ny lafiny (ohatra, manerana ny faritra fitantanana) ary noho izany dia mety tsy mahagaga raha nanondro "distance" azy ireo. Na izany aza, raha misy "nosy" fiarovana miorina any amin'ny faritra voaaro hafa, dia ny fitsipi-pifehezana mitovy (sy ny lanjany) dia mihatra amin'ny faritra tsy misy.
Loharanom-baovao ao Larval dia miovaova ary sarotra ny mamantatra. Noho izany, raha misy fepetra matanjaka, tsy miovaova, tsy misy fepetra, ny tahirin-dranomasina marobe dia tokony hiparitaka eo amin'ny faritra voajanahary. ref
Ataovy azo antoka fa mipetraka ao amin'ny toeram-ponenana ny karazam-borona. ref
Ampiasao ny endri-tsoratry ny boribory na ny boribory ho an'ny MPA raha mandinika ny fanarahan-dàlana (ohatra ny fampiasàna mari-pamantarana)
Ampiasao ny endrika matanjaka (oh: efamira na boribory, fa tsy làlan-tongotra) ho an'ny MPA raha mandinika ny fanarahan-dàlana (ohatra ny fampiasàna mari-pamantarana).
Ny habaka sy ny faribolana dia manome fahafaha-mifindra ho an'ny olon-dehibe, izay manampy amin'ny fitazonana ny fahamarinan-toerana amin'ireo faritra voaaro, ary noho izany, ny faharetan'ny fandraisany anjara amin'ny famokarana ny angovo, ny fiovan'ny karazan-javaboary, ary ny fiarovana ny tontolo iainana. Ny endrika hafa (ohatra, lava sy matevina) dia mety hanamora ny fampiasana bebe kokoa any amin'ireo faritra voaangona.
Ny endriky ny MPA dia singa manan-danja amin'ny famaritana sy fampiharana mahomby. Ireo MPA miaraka amin'ny endrika ara-dalàna dia azo faritana amin'ny tsipika latitude sy longitude ary mora ampiasaina. Ny MPAs amin'ny endrika tsy ara-dalàna dia tsy mora fantarina na ampiharina ary tokony hialana.
Fanaparitahana an'i Larval
Trondro maro, tsy fahita firy, ary vatohara no mamoaka atody maro sy tanora any amin'ny ranomasina misokatra. Ny lava-pelagika dia afaka mitsinkafona na mandehandeha mandritra ny ora, andro, na volana maromaro, mandalo lavitra an'arivony kilaometatra alohan'ny hametrahana azy. Maro ny antony mahatonga ny fiparitahan'ny lozam-pifamoivoizana izay miompana amin'ny sehatra. Ny faktiora misy fiantraikany amin'ny fiparitahan'ny renirano dia:
Ny fihetsika Larval: ny haingam-pandeha sy ny fitantanana ny lavanila dia tena karazana manokana
Ny androm-piainan'i Larval: ny habetsahan'ny fotoana lava eny an-dranomasina misokatra dia karazana manokana; manomboka amin'ny ora ka hatramin'ny volana, ary ny faharetan'ny pelagic dia andro 28-35 ref
Sakafo ara-tsakafo: be dia be ny sakafo azo ampiasaina mandritra ny fotoana fohy
Nifanandrify ireo Predators: Ny fiantraikan'ny biby mpirenireny, ny toe-pahasalamana, ary ny tahan'ny fitomboana
Ny fiantraikan'ny tondra-drano na ny zavatra hafa momba ny ranomasina
Ny fanadihadiana vao haingana koa dia mampiseho ny fiovaovana goavana amin'ny elanelam-pandrefesana larval, ary ny elanelam-piaramanidina avo lenta kokoa noho ny taloha (ohatra 100m ka 1km mankany 30 km). ref Ohatra, ny elanelana manasaraka ny faritry ny haran-dranomasina dia ny 5-15km ary ny fizakan-tena dia mahazatra. ref Noho izany, ny elanelan'ny tahiry dia tokony ho <15 km miaraka amin'ireo tahiry kely kokoa mifanelanelana akaiky kokoa. Ny fifandraisana eo amin'ireo mponina amin'ny karazam-borona dia voalohany indrindra, na ho an'ny karazana sessile manokana, noho ny fanaparitahana mandritra ny fiainana larva. Ho an'ny ankamaroan'ny karazana haran-dranomasina izay efa nodinihina, ny fifandraisana demografika dia naseho hiasa amin'ny mizana hatramin'ny folo kilometatra fa tsy amin'ny mizana amin'ny an-jatony kilometatra na mihoatra. Ity lamina eo an-toerana amin'ny fandraisana mpiasa irery sy ny fifandraisana eo amin'ny vatoharan-dranomasina ity dia misy fiantraikany amin'ny habe takiana amin'ireo MPA ao anaty tambajotra iray, ary mety hanondro fa na ny MPA kely aza dia mety hahazaka-tena. Fanampin'izany, ny fikarohana natao vao haingana momba ny Great Barrier Reef dia mampiseho fa ny tambajotran-dranomasina voaaro tsara dia afaka mandray anjara lehibe amin'ny famenoana ny trondro ao anaty fitahirizana ary amin'ireo haran-dranomasina trondro. ref
Ny ankabeazan'ny olon-dehibe dia amin'ny ankapobeny kokoa noho ny hetsi-pitantanana. Ny karazam-pandrosoana ho an'ny karazam-biby dia tsy mitovy amin'ny karazana. Mba hiarovana karazam-bazana maro ao anatin'ny MPA, dia mila dinihina amin'ny fomba famolavolana ny tambajotra MPA ny karazana hetsiky ny olon-dehibe. Ny habetsahan'ny fiarovana ny MPA dia miankina amin'ny habetsaky ny karazam-bary (na amin'ny olon-dehibe sy ny lava). ref Raha mihetsiketsika ny olon-dehibe, ny ranomasina dia lehibe sy manaparitaka. Raha mipetraka ny olon-dehibe, dia mety ho kely sy miavaka ny manodidina ny ranomasina.
Gombos et al. 2013 ref; novaina avy amin'ny Maypa 2012 ref
Zava-dehibe ny fampifandraisana amin'ny fanohanana ny tontolo iainana (toy ny herbivory) izay mampiroborobo ny harafesin'ny haran-dranomasina. Ohatra, ny fifandraisana eo amin'ny vatohara sy ny ala honko dia mety hampitombo ny hazandrano fihinanan-trondro amin'ny haran-dranomasina akaiky. ref Ny trondro maniry dia manala ala, izay mampiroborobo ny fitomboan'ny haran-dranomasina sy ny faharetan'ny haran-dranomasina. Ireo honko any Karaiba dia naseho hampitombo ny fahaverezan'ny haran-dranomasina afovoan-tany ho setrin'ny fikorontanana toy ny rivo-doza. ref Taorian'ny fisamboran'ny haran-dranomasina iray, ny macroalgae dia mety handrava ny haran-dranomasina ho an'ny toerana, hany ka mihazona ireo karazan-trondro matsiro izay mihinana aloeso dia manakiana ny fanarenana ny vatohara. Ny ala honko dia mampitombo ny sakafon'ny trondro izay mihinana macroalgae; Noho izany, ny fifandraisana eo amin'ny ala honko sy ny vatohara dia afaka manampy ny vatohara miala amin'ny korontana ary manatsara ny tahan'ny fitakiana. ref
Ambony havia: Nipoitra tampoka ny haran-dranomasina amin'ny habakabaka, ary matetika dia mampiseho ny fandeferana izy ireo ary mety hanoherana ny fivalozana. Ambony havanana: Ny rivotra mitsambikimbikina matetika dia mahatsapa hafanana be dia be. Ny Corals amin'ireny faritra ireny dia mety hampiakatra ny fihenan-tsasatra. Middle sisa: Trano fandriam-bahaka sy fasika mahatsiravina no ampiasaina ho toerana fikarakarana sy toerana ho an'ny karazana vatohara. Roa afovoany: Ireo toeram-ponenana mangiran-tany dia mifandray amin'ny rafitra haran-dranomasina amin'ny alàlan'ny volavolan-javatra, hery ary zavamananaina. Ambany havia: Ny fitrandrahana haran-dranomasina dia manitatra mihoatra ny sisin-taniny mba hampidirana ireo toeram-ponenana mpifanolo-bodirindrina manodidina azy, indrindra ny fandriana ahodin-drano, ala mikitroka, ary ala honko izay manome fiompiana trondro manan-danja. Ireo habaka mifandraika mifandraika ireo dia tokony hodinihina sy horaisina ho toy ny ampahany ao amin'ny tarika tokana. Ambony havanana: Reef zones (tsindrio ho an'ny dikan-teny lehibe). Sary: Ambony havia sy havia © S. Summerhays; afovoany havia © D. Obura; miditra havanana © NOAA; ambany ankavia © A. Reid; ambany ankavanana © NOAA CoRIS
Ireto manaraka ireto ny karazana habakabaka mifanila aminy:
Ny vatany amin'ny haran-dranomasina sy ny habetsahan'ny vatohara ambony mipoitra eny amin'ny riandrano dia matetika mampiseho fandeferana mavesatra ary mety hianjera na hiverina haingana amin'ny fahandroana. Izy ireo dia ho mpanome lanjany lehibe izay mety hipetraka any amin'ny faritra maty ary hanampy amin'ny fanarenana azy ireo.
Matetika ny tranoben'ny reefa no manome fitaovana tena ilaina ho an'ny trondro eny amin'ny vatohara izay handehanana any amin'ny vatohara ary hanampy amin'ny famerenana indray ny vondrom-piarahamonina voakasik'izany.
Ny fitaovam-pako sy ny zavamaniry voajanahary novokarina tao amin'ny toeram-ponenana an-dranomasina, na nentina avy tany amin'ny endriky ny trondro voajanahary sy ny fikambanana hafa, dia manome sakafo mahavelona ho an'ny vondrom-piarahamonina misy vatohara. Ny famindrana fitaovam-panampiana amin'ny fitaovana sy ny fanarenana ny rafitra manontolo.
Toeram-pisakafoanana eny amin'ny harambato
Ny fivoriam-be mivantana any amin'ny valan-dranom-bary, indrindra fa ny ala mikitroka any an-dranomasina, dia mipaka hatrany amin'ny fiovaovan'ny hafanana be dia be. Noho izany, ny vatohara dia mety mampiavaka ny fihenjanana amin'ny rivotra sy ny fanoherana ny fahandro.
Ny lakandranon'ny harambato dia mety ho toy ny farihy manan-danja amin'ny trondro.
Ny vatany ao anaty lakandrano voajanahary dia miharihary kokoa noho ny vatohara mitovy karazana amin'ny rano madio amin'ny harambato.
Seagrass Beds sy Sand Flat
Ny fandriana sy ny fasika manodidina ny haran-dranomasina manodidina ny haran-dranomasina dia tena ilaina amin'ny famokarana trondro amin'ny alina, toy ny mpangalatra sy ny mpangalatra, izay mialokaloka amin'ny harambato isan'andro. Rehefa avy mamakivaky ny farafara sy fasika sandoka, dia miverina any amin'ny vatohara ny trondro, ary mametraka ireo sakafo mahavelona (mankany amin'ny tranokala sakafo haran-dranomasina), ary hitondra anjara biriky amin'ny fitomboana sy ny fanarenana ny fiaraha-monina reef.
Ny rano mikitoantoana sy ny fiantraikan'ny ala honko dia mety hampihena ny fihenan-tsakafon'ny haran-dranomasina amin'ny fivalozana. Ho fampahalalana bebe kokoa sy ny tari-dalana momba ny faharetana sy ny ala honko misokatra amin'ny varavarankely vaovaoMitantana ny ala honko amin'ny fahantrana amin'ny fiovan'ny toetrandromanokatra fisie PDF .
Rehefa manakaiky ny vatohara, ny ala honko dia afaka manome sakafo amin'ny trondro izay mialoka amin'ny vatohara.
Ny alika honko dia mampiditra ny fisotroan-dronono azoka sy ara-organikaly ao anaty roapolon'ny sakafo haran-dranomasina, toy ny lakandrano sy lakandrano.
Ny ala honko dia afaka manome ny toeram-ponenana ao an-tanimbary eo anelanelan'ny fandriana sy haran-dranomasina izay mampitombo ny fivelaran'ny trondro tanora, noho izany ny honko dia afaka mitaona mafy ny rafitry ny trondro amin'ny haran-dranomasina akaiky. ref
Ny fikarohana natao tany Karaiba dia nanaporofo fa mihoatra ny avo roa heny ny biomassan'ny karazan-trondro manan-danja ara-barotra, raha nifanerasera tamin'ny ala honko ny fonenana olon-dehibe, nanamafy ny ezaka fiarovana amin'ny alàlan'ny fiarovana ny ala honko, ny fandriam-bidy, ary ny haran-dranomasina. ref Ny fianarana vao haingana any Aostralia dia mampiseho koa fa ny fifandraisana eo amin'ny vatohara sy ny ala honko dia mampiroborobo ny habetsahan'ny karazan-trondro voaangona. ref
Ireo tarehimarika ireo dia maneho fa ny fifandraisana eo anelanelan'ny fandriana sy ny ala honko ary ny haran-dranomasina dia mety hisy fiantraikany amin'ny haben'ny trondro sy ny habetsahan'ny trondro (ohatra ny fako sy ny parrot). Top - Mangroves ankehitriny: Ny taratasy mena "A" dia maneho ny zana-pivarotan-jwana, rehefa tonga any amin'ny habeny iray ao anaty fandriana iray, mankany amin'ny ala honko (B). Ny ala honko dia toy ny toeram-ponenan'ny zana-pokontany mialohan'ny trondro miala amin'ny vatohara (C), ary ny biby biomass dia manatsara kokoa ny haran-dranomasina (C), ny tandroka (D), ary Montastrea reefs (E). Ny trondro sasany (F), toy ny karazana papango sasany, Scarus guacamaia, dia miankina amin'ny ala honko ary tsy hita raha tsy misy ny honko. Ambany - Tsy misy honko: Raha tsy misy ny ala honko, dia miala mivantana avy eny amoron-dranomasina mankany amin'ny haran-dranomasina ny trondro ary mipoitra amin'ny haran-dranomasina (G) amin'ny haben'ny lanjany kokoa ary amin'ny lanjany ambany kokoa, noho izany dia mora kokoa amin'ny fandrobana. Novaina avy amin'i Mumby et al. 2004. Loharano: Peter Mumby
Toerana sy Dunes
Ny sisin-drano dia faritra mihetsika. Ny fikorontanan'ireny faritra ireny dia mety hiteraka korontana eo amin'ny ranomasina, fanovàna ny fihodinan'ny voajanahary voajanahary sy ny fikajiana ny fasika eny amoron-dranomasina, ny fihenan'ny rano any anaty rano, na ny fanimbana ny harena an-dranomasina miaraka amin'ny be loatra loatra. Ireo habaka mifanandrina dia manome lanja sy karazan-javamaniry isan-karazany amin'ny rafi-pitaterana vatohara, ary mety hampiseho izany fahasamihafana hafa amin'ny fandrakofana. Noho izany dia zava-dehibe ny mamantatra ireo vatohara ireo ary ahitana ohatra marobe avy amin'ny tsirairay ao amin'ny faritra voaaro, raha azo atao.
Ny fitrandrahana haran-dranomasina dia manitatra mihoatra ny sisin-taniny mba hampidirana ireo toeram-ponenana mpifanolo-bodirindrina manodidina azy, indrindra ny fandriana ahodin-drano, ala mikitroka, ary ala honko izay manome fiompiana trondro manan-danja. Ireo habaka mifandraika mifandraika ireo dia tokony hodinihina sy horaisina ho toy ny ampahany ao amin'ny tarika tokana. Sary © Jason Valdez / Marine Photobank
Fikirana mifandraika sy ekolojika
Ny fanadihadiana vao haingana dia mifanakalo hevitra momba ny maha-zava-dehibe ny fampidirana ny fifandraisana amin'ny drafitra fiarovana. ref Ireo fandinihana ireo dia mampiseho ny fomba fiasa ara-tontolo iainana (ohatra ny fifandraisana eo amin'ny toerana misy azy) dia azo ampidinina amin'ny fitaovana fanamafisana fanapahan-kevitra toy ny algorithms amin'ny alàlan'ny safidy (ohatra MARXAN) mba hanatsarana ny fahombiazan'ny faritra voaaro. Tena ilaina ny ezaka toy izany mba hanampiana ny mpitantana hampiditra fitantanana ny tontolo iainana ho fanorenana ny faritra voaaro an-dranomasina.
Ho an'ny tari-dàlana farany momba ny fampidirana ny fitrandrahana larval sy ny hetsiky ny hazandrano haran-dranomasina ho an'ny fananganana tahirin-dranomasina, misokatra amin'ny varavarankely vaovaokitiho eto.
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoHorohoron-tany Larval sy Hetsika momba ny trondro misy vatohara, ary ny fiantraikany amin'ny fanorenana tambajotra an-dranomasina
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoNy famolavolana ireo tambajotra voaaro hiaro ny fiarovana ny fiovaovan'ny toetr'andro
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFitsipika momba ny biofisika momba ny famoronana tambajotra marefo amin'ny sehatry ny fiarovana ny maria mba hampidirana ny jono, ny zavamaniry sy ny zavamananaina ary ny fikorontanan'ny toetrandro ao amin'ny Coral Trianglemanokatra fisie PDF
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoNy Siansa ao amin'ny tahirin-dranomasina
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoNOAA Foibe nasionalin'ny fiarovana ny Marine
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFitsipi-panorohana ny MPA Network Design
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFikojakojana ny fikolokoloana fisakafoanana: Boky Torolàlana ho an'ny mpitantana marin-drano mpiaro an-dranomasinamanokatra fisie PDF